🎣 Ịkụ azụ | Gaa na Hultsfred
N'ezie ọ dị nzuzu!
Ụbọchị ịkụ azụ na-enweghị ikuku na-apụta na mmiri, ụzarị anyanwụ na-ekpo ọkụ… n'ezie ọ bụ azụ dị mma? Ịkwanye mmiri ịkụ azụ na-adịghị agwụ agwụ na mgbanwe dị ukwuu na obodo anyị. Nke a bụ perch, pikeperch, pike, carp na tench ịkpọ aha ole na ole. Chọta ebe ịkụ azụ kacha amasị gị wee nwee mmetụta dị jụụ na-agbasa n'ime ahụ gị ka ị na-eche ihe mkpuchi!
Oke ohia nke nwere ezigbo azu. Örsjön bu obere ohia ohia nke nwere uzo ato di warara. Gburugburu gụnyere nke coniferous ọhịa na n'ọnụ bụ
Ọdọ mmiri na nnukwu azu kaapu. Färgsjön bụ ezigbo ihe atụ nke otu obere ọdọ mmiri nwere ike isi bụrụ eldorado maka ịkụ azụ egwuregwu. N'oge ọdịda
A ọdọ na pikeperch azu nke ọkwa. Hjortesjön dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Virserum, nke dị nso Virserumssjön nke ejikwara ya. Ọdọ adịghị mma n'ihe oriri
Linden bụ nnukwu ọdọ mmiri nwere mmiri na-enweghị mmiri na ọtụtụ obere agwaetiti. Osisi pine, porcupine, blueberries na heather na-achịkwa gburugburu ọdọ mmiri ahụ. Ọdọ miri emi
Stora Åkebosjön dị ihe dị ka kilomita isii n’ebe ọdịda anyanwụ nke Hultsfred ma ị ga-ahụ ya ma ọ bụrụ na ị si n’ụzọ 6 gafee Hammarsebo na-aga Stora Hammarsjön. Ọdọ
Ọdọ mmiri ịkụ azụ egwuregwu nwere agwa ọdọ mmiri dị larịị nke nwere nnukwu pike na azụ kap. Hulingen dị n'akụkụ etiti obodo Hultsfred. Ọ kachasị mfe ịchọta ọdọ mmiri ma ọ bụrụ na ị
Ahia ozara n'ime mmiri na-asọ. Oke oke oke omimi Oke omimi omimi Azu umu Perch Pike Sutare Benlöja Lake
Oppbjärken bụ oke ohia miri emi nke nwere ezigbo mmiri na mmiri doro anya. Ọdọ a dị kilomita ole na ole n’ebe ọwụwa anyanwụ nke Hultsfred, n’ebe ndịda nke obodo Fallhult. Gburugburu
Nne bụ otu n'ime ọdọ mmiri anọ nke Virserums SFK na-agbazinye ma na-agbazinye azụ na ndị ọzọ bụ Mistersjö, Lysegöl na Ånglegöl. Klọb na-ere
Ọdọ miri emi
Djupsjön bụ obere ọdọ miri emi ma miri emi dị n’ebe ọdịda anyanwụ nke Hultsfred. Osimiri ahụ bụ akụkụ nke FVO nke Stora Hammarsjön. SFK Kroken na-ele anya na mpaghara ahụ
Bysjön dị ihe dị ka kilomita 15 na ndịda ọdịda anyanwụ nke Hultsfred. Bysjön bụ otu n'ime ọdọ mmiri ndị so na Flatens Fiskevårdsområde na usoro mmiri Gårdvedaån. Ga-achọta
Stensjön bụ ọdọ mmiri mara mma ma dịkwa jụụ nke dịtụ obere ihe dịka kilomita iri na ndịda ọdịda anyanwụ nke Hultsfred. Ọ bụ akụkụ nke Stora Hammarsjön's FVO
Osimiri kachasị ukwuu na mpaghara ọdọ mmiri Hammar - ọdọ mmiri mara mma nke nwere uru ịkụ azụ egwuregwu dị elu na nnukwu ohere mmepe. Stora Hammarsjön bụ ezigbo ọdọ mmiri dị obere ma pere mpe
Hesjön bụ otu n’ime ọdọ mmiri 20 nke bụ akụkụ nke FVO Stora Hammarsjön. Ndi SFK Kroken na Hultsfred na-agbazinye ma na-elekọta mpaghara ahụ. N’ime
Alegöl ma ọ bụ Ålegöl, dị ka ọ na-ekwu na map, bụ ezigbo mmiri egwurugwu. Gölen dị ihe dịka 5km na ndịda Hultsfred na ruo
Lilla Åkebosjön dị n'ebe ugwu Stora Åkebosjön na Stora Hammarsjön FVO na ọdọ mmiri jikọtara site na iyi. Ọ bụrụ na ị gawa ọdịda anyanwụ site na Hultsfred
Välen dị n'etiti Stora Hammarsjön's FVO, ihe dịka kilomita asaa na ndịda ọdịda anyanwụ nke Hultsfred. Ọdọ mmiri bụ SFK Kroken na-ahụ maka ya, bụ nke na-ahapụ egwurugwu mgbe niile.
A carp ọdọ na a desert agwa. IHE: You nwere ike naanị azụ na ọdọ dị ka onye so na SFK Kroken. Stockebrogöl dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Stora Hammarsjön,
Ånglegöl dị n'etiti Målilla na Virserum, na-esote okporo ụzọ 23. Ọdọ bụ otu n'ime ezigbo ihe atụ nke otu esi emepụta ihe na-adọrọ adọrọ
Lysegöl bụ ọdọ mmiri gbara okirikiri nke dị na mpaghara Småland. Gölen dị na ndịda Virserum nke dịdebere okporo ụzọ 23. Mmiri ahịrị mmiri
Virserumssjön bụ ọdọ mmiri miri emi na enweghị nri nke dị n'akụkụ obodo Virserum. Ọdọ mmiri na ime obodo mara mma ma nwee ọtụtụ ihe inye ndị njem nleta n'akụkụ ịkụ azụ egwuregwu,
Nke abụọ gbatịa nke Emån. Akụkụ a sitere na Klövdala site na Järnforsen ruo Ryningsnäs. Ohia na ala ịta ahịhịa gbara osimiri ahụ gburugburu. Osimiri ahụ dị iche iche
Järnsjön dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ Järnforsen ma Emån na-agafe ya. Ọdọ bụ akụkụ nke Järnforsen FVO. Ọ bụ obere ọdọ mmiri na-emighị emi na gburugburu ya
Melsjön bụ obere ọdọ mmiri na-emighị emi na mmiri ahụ bụ ndọtị nke Gårdvedaån. Ọ dị n'ebe ugwu Lake Flaten ọdịda anyanwụ nke Målilla ma gụnyere
Flaten bụ ọdọ mmiri egwuregwu egwuregwu na-ewu ewu, ọ bụghị nke kachasị site na ndị njem nleta ịkụ azụ mba ọzọ. Ọ dị ihe dị ka kilomita 15 na ndịda ọdịda anyanwụ nke Hultsfred n'akụkụ okporo ụzọ dị n'etiti Målilla na
Skiren bụ obere ọdọ na-emighị emi nke bụ akụkụ nke usoro mmiri Flatens FVO na Gårdvedaån. Flatens FVO gụnyere ọdọ mmiri Garpen, Skiren, Vvre Vrången,
Övre Vrången bụ akụkụ nke Flatens Fiskevårdsområde. Ọdọ mmiri ahụ dị n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke Virserum. Ọ bụ ọdọ oke ọhịa nke nwere ahịhịa na-enweghị ahịhịa ma ewezuga n'ime ha
Gnötteln bụ ọdọ mmiri mmiri na-adịghị edozi ahụ. Ebe ọ bụ na ọdọ mmiri dị na mpaghara ala ubi, ọdọ mmiri ahụ abụghị obere ihe maka mpaghara nwere mmiri doro anya.
Ogologo Emån dị ihe dịka kilomita 22. Osimiri ahụ na-amalite na obodo Nässjö wee banye n'ime oke osimiri dị n'etiti obodo Oskarshamn na Mönsterås.